संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ ।
बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन् ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जगन्नाथ भुसाल र केबी भुसाललाई जनही १०/१० हजार रुपैयाँ तलब दिएर कानुनी सल्लाहकार राखिएको छ । एउटै व्यक्ति दुईदुई तहमा कानुनी सल्लाहकार बनेका पनि छन् । कपिलवस्तुका होमबहादुर कुँवरले कपिलवस्तु नगरपालिका (एक लाख १५ हजार) र बुद्धभूमि नगरपालिका (एक लाख ५० हजार) मा काम गर्छन् । विकास आचार्यले बर्र्दियाको बाँसगढी नगरपालिका (१० हजार) र बाँकेको खजुरा गाउँपालिका (१८ हजार) कानुनी सल्लाहकारबाट पारि श्रमिक बुझिरहेका छन् । पाल्पाका नारायणप्रसाद ज्ञवालीले पनि रिब्दिकोट गाउँपालिका (निःशुल्क) र तिनाउ गाउँपालिका (वार्षिक ९६ हजार) मा काम गर्छन् ।
महालेखाले पनि यस्ता पदको बेरुजु देखाएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारि श्रमिक दिने व्यवस्था छैन’, महालेखापरीक्षक २०७५ सालमा प्रकाशित ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आव ०७५/०७६ मा प्रदेश नम्बर २, ३, ५ र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका महोत्तरी, रामेछाप, बाँके र जाजरकोट जिल्लाका १० स्थानीय तहले सोबापत ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक भुक्तानी गरेका छन् । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत देखिएन ।’
१२ जिल्लामा ४० जना पत्रकारले प्रेस सल्लाहकार/प्रेस संयोजकको जागिर पाएका छन् । ३१ जनाले कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि बढीमा साढे ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब पाउँछन् । नासु स्तरको सुविधा पाउने गरी पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार भएपछि पत्रकार गोविन्द भट्टराईले गाउँले देउराली पत्रिकाको प्रधानसम्पादकबाट राजीनामा दिए । अधिकांश प्रेस सल्लाहकार मूलधार र स्थानीय मिडियामा पनि सँगसँगै काम गरिरहेका बेला भट्टराई अपवाद हुन् । प्रेस सल्लाहकारको मुख्य काम पालिकाको औपचारिक कार्यक्रम र सकारात्मक विषयका ‘समाचार’ लेख्ने र मिडियामा पठाउने हो ।
प्रेस सल्लाहकारमध्ये कतिले स्थानीय तहका प्रमुखको स्वकीय सचिवको काम गरेका छन् । प्रमुखको फोटो खिचेर मिडिया र फेसबुकमा हाल्ने जिम्मा पनि उनैको हुन्छ । कार्यालयको कम्प्युटर अपरेटरदेखि दर्ता चलानी फाँट सम्हाल्न प्रेस सल्लाहकारले भ्याएका छन् । स्थानीय तहको मिडियाका लागि विनियोजन गरेको बजेट सल्लाहकारले आफ्नै गैरसरकारी संस्था र विज्ञापन एजेन्सी खोलेर पनि चलखेल गरेका छन् ।
‘राज्यको चौथो अंगलाई स्थानीय सरकारले गोजीमा राख्दा सत्यतथ्य समाचार कसरी आउँछ ? ’, प्युठानको सरूमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झकबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘पत्रकारले त खोजी गर्नुपर्‍यो नि ? कमीकमजोरी देखाइदिनुपर्‍यो । प्रेस सल्लाहकार राखेर सत्य ढाक्न लगाएको राम्रो होइन ।’